यस साता नेप्से परिसूचक र कारोवार रकममा निकै राम्रो सुधार ; के कुरामा ध्यान दिने ? - Lagani News
Home Share यस साता नेप्से परिसूचक र कारोवार रकममा निकै राम्रो सुधार ; के कुरामा ध्यान दिने ?
यस साता नेप्से परिसूचक र कारोवार रकममा निकै राम्रो सुधार ; के कुरामा ध्यान दिने ?
Published: Friday, September 7, 2018 2018-09-07T12:29:00-07:00
Santosh Raj Bajgain September 07, 2018 Share,
लगानीन्युज/काठमान्डौ: यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १९३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ३२२८५ कारोबारबाट दुई अर्ब ८८ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरका एक करोड दुई लाख ५५ हजार छ सय ८० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २५९.३४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १८० कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । जस अनुसार ११७८८ कारोबारबाट ८० करोड ३० लाख सात हजार रुपैयाँ बराबरका २५ लाख ४२ हजार सात सय १० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए ।
साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३९.४९ अंकले बढेर अन्तिम दिन १२२९.७७ अंकमा पुगेको छ ।
हेरौ साताभरको नेप्से परिसूचक :
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ८.५५ अंकले बढेर २६०.३५ अंकमा आईपुगेको छ ।
(स्पस्ट हेर्न तलको टेबलमा क्लिक गर्नु होला )
यस साता कारोबार रकम (२२ करोड ५० हजार रुपैयाँ) को आधारमा एनएमबि बैंक लिमिटेड सेयर अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (छ लाख ६४ हजार कित्ता) र कारोबार संख्या (१५४६ वटा) को आधारमा पनि एनएमबि बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ ।
सातामा सर्वाधिक रकमको कारोबार भएका ५ कम्पनीहरु ः
यस साता सूचिकरण तर्फ निम्न कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएको छ । यस साता जम्मा ६८ लाख ०९ हजार कित्ता शेयर सुचिकृत भएको छ।
शेयर बजार सकारात्मक ट्रेन्डमा छ भन्दैमा कम्पनीको आधारभूत कुरा नै नहेरी लगानी गर्दा जोखिम बढ्न जान्छ। आधारभूत रुपमा बलियो कम्पनी किन्दा बजार घट्दापनि हामीले ठुलो नोक्सानी बेहर्नु पर्दैन। बजारको एउटा चक्र हुन्छ, बजार सधै घट्ने र सधै बढ्ने हुदैन। प्रतिफलको आधारमा गरिएको दिर्घकालिन लागनीनै उत्तम हुन्छ।
(नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्रकाशन गरेको रिपोर्टको आधारमा )
Tags # Share
By Santosh Raj Bajgain - September 07, 2018
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको अध्यक्षमा छोटेलाल रौनियार
लगानीन्युज/काठमान्डौ: नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको कार्यसमिति बैठकले फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । अ...
म्याग्दी जिल्लामा असोज ६ गते शेयर तालिम आयोजना हुने
लगानीन्युज/काठमान्डौ : म्याग्दी जिल्लाको मंगला गाउँपालिका वडा न.२, बाबियाचौर मा एक दिने शेयर बजार तालिम आयोजना हुने भएको छ । उक्त कार्...
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेष्ट फण्ड-१ ले २१ दशमलव ०५२६ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश दिने
लगानीन्युज/काठमाडौँ : एनएमबि म्युचुअल फण्ड द्धारा सञ्चालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेष्ट फण्ड-१ ले कर सहित २१ दशमलव ०५२६ प्रति...